IZiteshi ezintsha zokuhlanza izidumbu • Iziteshi zokuhlanzeka ze-METALCO
Iziteshi zokubonisa ukubulala amagciwane / iziteshi zokuhlanzeka zezandla kuyinto entsha ekunikezelweni kwethu njengento esetshenziswayo izakhiwo ezincane. Isixazululo esenza lula imisebenzi ye-disinitness yesandla futhi ukulahlwa kwemfucuza.
Landa amakhathalogi nohlu lwamanani >>
Ukugeza nokuhlanza amagciwane izandla Le yimisebenzi ebalulekile ekuvinjelweni ngempumelelo kokusakazeka kwamagciwane namagciwane, ngokuvamile akhona esikhunjeni sezandla.
Ikakhulu esikhathini samanje esinzima ubhubhane lwe-coronaviruslenze kahle izinqubo zokuhlanzeka kanye nokubulala amagciwane isandla kubamba iqhaza elikhulu ekwehliseni kwezifo kanye nasekunciphiseni ukusakazeka kwamagciwane, futhi lokhu hhayi kuphela ezikhungweni zezokwelapha, kodwa nasezitolo, enxanxatheleni yezitolo, eminyuziyamu, ezimbonini zezimboni, emakhefi, emahhotela nasezitolo zokudlela, okusho ukuthi yonke indawo lapho kunamaqembu amakhulu abantu.
Bheka futhi: Izinhlelo zokumisa amagumbi okuhlanza zisebenzisa indlela eyomile yenkungu
Ukugeza njalo nokuhlanzisisa izandla ngaphambi kokungena ezindaweni ezivaliwe zomphakathi, kanye nangesikhathi somsebenzi, ukuthenga nezinye izinto kuholela ekususweni ngempumelelo kokungcola kanye nama-microorganisms we-pathogenic ebusweni bezandla.
Ama-virus amaningi, kufaka phakathi i-coronavirus ebanga lesi sifo Covid-19, iyiseyinti ye-RNA embozwe ulwelwesi olunamafutha, olwenza kube lula ukuvikela ukusabalala kwayo kanye nezifo ngokusebenzisa amakhemikhali anjengensipho nangokubulala amagciwane.
Inhlangano Yezempilo Yomhlaba incoma ukugeza izandla ngensipho namanzi okungenani imizuzwana engama-30 kanye nokusetshenziswa kwezibulala magciwane okususelwa kumaminithi. 60% utshwala.
Ngokwengeziwe, ungazivikela ekuthelelekeni ngokusebenzisa amagilavu ​​alahlwayo, imaski ukumboza impumulo kanye nomlomo izindwangu ezibulala amagciwane indawo esetshenziswa kakhulu futhi ethintwe kaningi.
Inqubo efanele yokuwasha kanye nokubulala amagciwane esandleni kunciphisa izitshalo ezincane ezikhona esikhunjeni sezandla ngokusebenzisa amakhemikhali okubulala amagciwane.
Ukuhlikihla isibulala-magciwane esikhunjeni sezandla kufanele kuthathe cishe imizuzwana engama-30 futhi akufanele ukhohlwe inani elifanele lokulungiselela, kanye nokubulala amagciwane ezindaweni okunzima ukufinyelela kuzo ezandleni, okusho isikhala esiphakathi kweminwe.
Ukugeza izandla kaningi nokuhlanzeka kwezibulala-magciwane izandla, yize kubalulekile ukuze siphephenoma kunjalo, bomisa isikhumba sezandla, okungadala ukungezwani komzimba nokuvuvukala kwesikhumba. Ukwehlisa umthelela ongemuhle wezibulala-magciwane ezisetshenziswe esikhunjeni sezandla, kufanele kusetshenziswe amalungiselelo afanele okuswakalisa isandla.
Ukugeza izandla, sebenzisa imikhiqizo elungele isikhumba.
Izidakamizwa Okwamanje okusetshenziselwa ukubulala amagciwane ngamalungiselelo asuselwa ku-ethyl noma i-propyl alcohol. Okuhle kakhulu nakho kuqukethe izinto zokuthambisa.
Bona izibonelo zokuthola kabusha kwe-METALCO
Iziteshi ze-Metalco disinfection
Insipho nemishanguzo yokubulala amagciwane ehlongozwe ngabakwaMetcoco iyavuma ukungezelelwa kokungaxhumani nesibulali-magciwane esifanele, esisezingeni eliphakeme.
I-ColOMBO Full Station
Iziteshi zokuhlanzeka (amaphuzu okuhlanza) ziyizixazululo ezisebenzayo nenhle, ezilungele ukusetshenziswa kunoma yiliphi igumbi.
Amadivayisi ethu aklanyelwe njengeziteshi zokuhlanza izandla nendawo yokusabalalisa izinto eziwusizo ukuqukatha ukusabalala kwe-COVID-19, njenge amagilavu, imaski noma izindwangu.
Iziteshi zokubulala amagciwane zihlomele futhi ngesitsha esikhethekile sensimbi yangaphakathiowenza imisebenzi imigqomo kadoti.
Iziteshi zokubulala amagciwane i-Metalco zilula futhi zinembile ukusebenzisa amasistimu alungele izindawo zomphakathi nezindawo ezizimele, njengamahhovisi, izikhungo zokuthenga, izikole, amajimu, izindawo zokudlela nezinye eziningi.
Ngaphezu kwalokho, isiteshi sokubulala amagciwane siyithuluzi lokusekela elibalulekile ekuhlangabezaneni nezimo zokuhlanzeka emsebenzini nasekuvikelweni komuntu ngamunye kwezisebenzi, ngokuhambisana nenqubo elawula ongqongqoshe yokunciphisa ukusabalala kwe-coronavirus emsebenzini.
Izisombululo ezisetshenziswa esiteshini se-Metalco disinfection zivumela ukwelula okuphezulu kokusebenza kwensiza yediski, ukulahlwa kwemfucuza okulula nokuhlanzekile futhi wenze iziteshi zibe ezisebenzayo nenhle, futhi futhi zilungele ukusetshenziswa kwizikhala zasendlini.
Isitsha sokungcola sivumela ukuqoqwa kwenhlanzeko futhi ukulahlwa kwemfucuza.
Isiteshi sokukhishwa kwe-disalon ye-Matalco sifaka:
isisebenzi sokulungiselela isandla
Ubukhulu besiteshi se-disinitness (inguqulo ngezinyawo):
Umthamo we-liner wangaphakathi: 60 lt
Isisindo: ngu-28 kg
Ukwakhiwa kwesiteshi sokubulala amagciwane
Imishini ye-Metalco disinfection yenziwa ngensimbi efakiwe noma engenasici, enephaneli yangaphambili ngombala owodwa, kuyilapho amaphaneli aseceleni atholakala ngemibala ehlukene engu-7.
I-COLOMBO Isiteshi Esigcwele - inguqulo yensimbi engagqwali
Lezi ziteshi zokubulala amagciwane zenzelwe ukusetshenziswa endlini futhi zitholakala ngezinhlobo ezimbili:
ngesakhiwo sangaphandle senziwe ngokuphelele ngensimbi engenasici
ngesakhiwo sangaphandle esenziwe ngensimbi efakwe ngaphakathi, esinomphambili onesiphetho esibushelelezi
Ngenxa yokusebenzisa imishini yokuzenzela i-disinitness ezindaweni zomphakathi nasezakhiweni zezinkampani, ezikhungweni nasezindaweni zokusebenza, kungenzeka ukungathinteki kwesandla sokungathinteki.
Imodyuli eyisisekelo ifaka:
izimbobo ezibekwe ngaphambili odongeni olungaphambili
igumbi elinomnyango wehliselwe ngaphambili nesibambo sokusetha izinto ezidingekayo (izicubu, amagilavu ​​alahlwayo, omamaski)
umnyango wangaphambili onendawo yokuvula imfucuza emibili
Ukuphaka Isigcini sesikhala
I-MAGELANO Isixazululo esiguquguqukayo
Bheka futhi: Imigqomo kadoti yemigwaqo yesimanjemanje njengengxenye yokwakhiwa kwamadolobha
Ngokwesicelo sekhasimende, izinto ezengeziwe ezingeziwe zingalethwa:
amasondo amane e-ABS, esikhundleni sezinyawo eziguqukayo
Isiteshi se-disinversal / CABRAL dispenser
Yisixazululo esisebenzayo nenhle efanelekayo ukusetshenziswa kwangaphakathi kanye / noma ukusetshenziswa kwangaphandle.
Isabalalisa siqukethe ishubhu le-oval aluminium esebenza njengesithako sejeli se-diski esingama-8 litre kanye ne-aluminium efakwayo egcina isitsha sensimbi se-stainless / chrome.
Isisekelo esizixhasayo senziwe ngensimbi egqinsiwe ngesiphetho esenziwe nge-powder efana ne-dispenser.
Ukuze usetshenziswe ebhishi kuyenzeka ukuthi ufake igumbi lokuphikisa, futhi elenziwe nge-aluminium, ngaphakathi kweshubhu elinamafutha okuyi-insimbi enezingqimba zezinto ezifakwayo nesikhafu esinendawo yokufaka esihlabathini.
5 / 5 ( 47 amavoti )
umshini wokuhlonza isifo somdlavuzaIsiteshi sokuzelapha se-othomathikhiUkuphaka Isigcini sesikhalaisiteshi esingaxhunyanwe nesibulala magciwaneisisebenzi sokuxhumana esingasebenzisiIsango lokubulala amagciwaneAmasango okubulala amagciwaneukuhlukunyezwa i-disinversalI-ColOMBO Full Stationindawo yokubulala amagciwaneukubulala amagciwane isandlaekhemisi isandla disinfectionukubulala amagciwane kwesandlaisisebenzi sokuhlanza isifowezinwele zomdlavuza wezinweleukubulala amagciwane izandla namathuluziisandla sokulwa namagciwaneukubulala amagciwane laphoigxathu negxathu umdlavuza ukubulala igciwaneukungasebenzi kwesandla kwe-ayliffei-disinitness pdfuketshezi lwesandla semithiamalungiselelo wokulwa namagciwaneukubulala amagciwane ngaphambi kokuqoqwa kwegaziukubulala amagciwane ezandleni ezisanda kuzalwaIsifo se-Rossmann disinitnessuhlelo lokubulala amagciwaneumdlavuza schulke disinfectionukubulala amagciwane isandla ngotshwalaukubulala amagciwane isandla salonukubulala amagciwane isandla gastronomyukubulala amagciwane ku-salonukubulala amagciwane esibhedlelaukubulala amagciwane kwesandla ngokusho kobaniIsisebenzisi se-CABRALukuguliswa umdlavuza we-ecolabukuhlanzeka kwesandla ukungasebenzi kwegciwaneukuhlanzeka nokuhlanza isandla ukungasebenzi kwegciwaneukuhlanza inhlanzeko nokubulala amagciwane ezandleniukuhlanzeka izandla nokuhlanza amagciwaneamagilavu ​​alahlwayolapho ukubulala amagciwane isandlaI-MAGELANO Isixazululo esiguquguqukayobusoukugeza izandla magciwaneukugeza nokusabalalisa amagciwane izandlaukugeza izandla nokungasebenzi kahleukugeza nokusabalalisa amagciwane ngezandla usebenzisa indlela ye-ayliffeinqubo yokugeza izandla nokubulala amagciwaneukugeza nokusabalalisa amagciwane izandla endaweni yokwakha ubuhleukugeza nokukhipha izidakamizwa esibhedlelaukugeza izandla nokusabalalisa amagciwane ngokwenqubo ye-Ayliffeuketshezi lokuhlanza amagciwane ezandleni zomntwana osanda kuzalwaukubulala amagciwane kwesandla esifaneleiphuzu lokuhlanzekai-purell isandla disinfectionukubulawa kwe-schulke ngesandlaizindwangu ezibulala amagciwanesensiva isandla magciwaneisikhumba sokukhubazeka isandlaAma-disinversal sluitsIzidakamizwaIsiteshi sokusabalalisaIsiteshi sokusabalalisaIsiteshi sokuhlanza amagciwaneIsiteshi sokuhlanzekaIsiteshi sokuhlanzekaIziteshi zokubonisa ukubulala amagciwaneIziteshi zokubonisa ukubulala amagciwaneIziteshi ze-Metalco disinfectionIziteshi zokubonisa ukubulala amagciwaneIziteshi zokuhlanzekainkungu eyomiletenzi isandla disinfectionaqonde ukuthi kungani ukubulala amagciwane umdlavuza kubalulekile emsebenzini wezinweleI-VESPUCCIngubani onomdlavuza magciwaneIsiteshi samahhala esisebenza ngokukhululekileI-sanitiser pure-emi ngesandla emahhalaijeli yokuhlonza amagciwane omdlavuza
Indawo yokudlala yanamuhla ivumela ubumnandi obungenamkhawulo nobuphephile emoyeni omusha hhayi kuphela wabantwana babo bonke ubudala, kodwa futhi nentsha. ...
Njengamanje, ifenisha yasemgwaqweni ihlanganisa nezembozo zesihlahla. Lezi zinto ezisebenzayo nezinobuhle zingenziwa ngezinhlobonhlobo zezinto zokwakha. ...
Izinhlelo ezingamampunge ezisetshenziswe kwinqubo eyomile yezinkukhu zingasetshenziswa ezindaweni ezahlukahlukene. Njengamanje ukuthi ...
Izakhiwo ezincanyana zakhiwa ngezinto ezincane zokwakha ezihlanganiswe emkhathini wedolobha noma zitholakala esakhiweni sangasese ...
Kuliqiniso ukuthi umsebenzi womakhi wezakhiwo ngumsebenzi wamahhala ongaletha ukwaneliseka okuningi nezinzuzo zezinto ezibonakalayo, kepha indlela yokuqala ukusebenza ...
Imigqomo yokuhlukanisa imfucumfucu
Imigqomo yokuhlukanisa imfucumfucu njengengxenye yosizo lokuphinda kusetshenziswe kabusha komasipala ukugcina izikhala zomphakathi zihlanzekile, kuqedwe izinkinga ezihlobene ...